Sunday July 21, 2013 - 01:09:58 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Associated Somali Journalists waxay bogaadineysaa in Dalka Somalia laga hergeliyo sharciga Saxaafadda hasse yeeshee waxay Calaamatu su-aal saareeysaa qodobo ku jiro sharciga cusub iyo cidda loo qorsheeyay inay metelaan golaha Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed.
ASOJ waxay ku baaqeeysaa in qodobka xigashada warka laga saaro sharciga saxaafadda maxaa yeelay waa qodob halis badan maadama aan xigashada warka la cadeeyn Karin xilligaan xaalada amaan ee dalka aawadeed.
ASOJ waxay nasiibdaro u aragtaa damaca Dowladda Federalka Somalia ay ku qorsheeyneyso in golaha Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed laga dhigo tiro ka kooban:-
5 - Wariyeyaal madaxbanaan oo metelaya garab ka mida Ururka kala qeybsan ee NUSOJ.
5- Wariyeyaal ka socda Wasaaradda Warfaafinta
3- Xildhibaano Baarlamaanka Federalka Somalia
ASOJ waxay Dowladda Federalka Somalia ugu baaqeeysaa inay guud ahaan meesha ka saarto Xildhibaanadda ,sidoo kale waxay ku baaqeeysaa in Golaha Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed laga wada qeybgeliyo dhamaan Ururada Saxaafadda ee diiwaangashan Somalia .
ASOJ waxay hoosta ka xariiqeeysa inaysan marnaba aqbali doonin Golaha Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ,hadii codka aqlabiyada la siiyo Dowladda Federalka Somalia .
ASOJ waxay cadeeyneysaa inaysan marnaba aqbali doonin xeerka Saxaafadda hadii aan laga saarin qodobada Saxaafadda sida Xigashada warka iwm.
By Dahir Alasow – Gudoomiyaha Ururka isu taga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ASOJ.